Archive du 20170914
Mitia sy Fitia, kambana niraikitra Nosarahana omaly tao amin’ny HJRA
Zaza roa mahaleotena ankehitriny i Mitia sy Fitia. Tontosa omaly alarobia 13 septambra tao amin’ny HJRA Ampefiloha ny fanasarahana an’ireo kambana mirahavavy ireto.
Fampihavanam-pirenena Nandringa sahady
Tsikaritra nandritry ny lanonam-pianianana nataon’ireo 33 mianadahy handrafitra ny filankevitry ny fampihavanam-pirenena Malagasy (CFM) tetsy amin’ny Fitsarana avo Anosy omaly fa nalaina ny hanotrona teny an-toerana ireo solontena avy amin’ny antoko mpanohitra.
Tcheck Julien Matsubara “Fihavanana sadasada no eto”
Tcheck Julien Matsubara, fantatry ny rehetra amin’ny anarana maha mpanakanto Matsubara, no zandriny indrindra, 44 taona, amin’ireo mpikambana ao anatin’ilay komity ho an’ny fampihavanam-pirenena vaovao na ny CFM.
Rakotomalala Henri “Olon’ny HVM avokoa ireo notendrena”
Manaiky sy manaja ny fijoroan’ny CFM (Conseil du Fampihavanana Malagasy) ny FEDEP (Fédération des Ex-Détenus Politiques de Madagascar)
Manao ahoana ianareo ry Jean fa izahay aty mandry tsy lavo loha andro aman’alina. Mifandimby te handripaka anay na ny jiolahy sy ny dahalo na ny aretin-doza sy fahafatesana efa mandom-baravarana.
“Compteur intelligent » Fitaovana hiadiana amin’ny halatra herinaratra
Hiala maina amin’izay ireo mpangalatra herinaratra. “Compteur intelligent” miisa 8.500 izao no efa tonga hanoloana ny kaonteran-jiron’ireo tokantrano manana fandaniana mihoatra ny 900 kWh manerana ny Nosy.
Mpilatsaka an-tsitrapo Niampy 17 mianadahy indray
Niampy 17 mianadahy ireo mpilatsaka an-tsitrapo Malagasy rehefa nianatra nandritra ny enim-bolana. Samy mbola mpianatry ny oniversite avokoa izy ireo.
Fitondrana Rajaonarimampianina Manambitamby ny fiangonana zandriny koa
Anisan’ireo fiangonana zandriny iray ahitana tsy fahatomombanana eo amin’ny lafiny fotodrafitrasa ao Fenoarivo Atsinanana ny Acte des Apotres.
Seranam-piaramanidina Ivato Voahaja ny tetiandron’ny asa fanavaozana
Mizotra araka ny tokony ho izy ny asa fanavaozana sy fanatsarana ny seranam-piaramanidina eny Ivato, telo volana taorian’ny nandalovan’ny filoham-pirenena teny an-toerana.
Tany nohajariana 72 taona Tadiavina taranak’olon-tokana alaina
Mitroatra ny mponina avy ao Mangabe, Amparihitody, Ilafy ary Mahatsara-Ambatondrazaka.
JMJ 2018 Tanora iray hetsy no andrasana ao Mahajanga
Nigadona tao Mahajanga omaly hariva ny Lakroan’ny JMJ IX amin’ny maha mpampiantrano ny Fihaonamben’ny tanora ity tanànan’ny voninkazo ity amin’ny taona 2018.
Tsipy kanetibe Ho tonga anio ry Toutoune sy ny namany
Higadona eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato anio alakamisy 14 septambra amin’ny 2 ora tolakandro ny ekipa Malagasy misy an’i Toutoune,
Inona no hafenina ?
Miha manjavozavo hatrany ny raharaham-pirenena ary miala bala ny fanontaniana apetrak’ireo mpanao gazety isan’andro ireo mpitondra. Inona no hafenina ?
Asa fitsirihana fiara eto Antananarivo Tsy hihemotra velively ny kaominina
Manoloana ny fandavan’ny mpitondra fiarakaretsaka vitsivitsy ny fanapahan-kevitry ny filankevitry ny kaominina Antananarivo Renivohitra mahakasika ny
Ankizy ôtista Manampy azy ireo ny Airtel
Ankoatra ireo olona sahirana ara-pivelomana dia mijery manokana ireo ankizy ihany koa ny orinasam-pifandraisana Airtel Madagascar.
Pesta nafenimpenina Tandrevaka sa famoanona ny Malagasy ?
Nokobokobonin’ny fanjakana ny fisian’ny aretina pesta, raha dinihina amin’ny hoe efa tamin’ny 28 aogositra no nisehoan’ny tranga voalohany nisian’ny lehilahy maty tampoka tany anaty fitateram-bahoaka niala an’Ankazobe hihazo an’i Toamasina, nijanona tao Moramanga ary mety namindra aretina tao ny razana.
Fiara “Karenjy” Mihamitombo ny famokarana
Manomboka miroborobo ny indostria fanamboarana fiarakodia eto amintsika amin’ny alalan’ny “Karenjy” any Fianarantsoa.
Fanabeazam-pirenena Tafiditry ny politika maloto
Hozaraina rahampitso zoma 15 septambra etsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina Mahamasina ny taratasy fifanarahana arak’asa ho an’ireo mpampianatra FRAM vao noraisina ho mpiasam-panjakana.
Tsy fandriampahalemana any Betroka Miantso vonjy ny Andrimaso
Mirongatra isan’andro tsy fisian’ny fandriampahalemana any Betroka, hoy ny filohan’ny Andrimaso any an-toerana, Razafindrazanaka Adjad Ridji, nitatitra ny zava-misy any amin’ity distrika ity ka mahatonga ny olona tsy matoky ny mpitondra ankehitriny.